दिपेश घिमिरे काठमाडाैं, ५ जेठ
कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग सामना गर्न सरकार सुस्त देखिएको छ । विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई राहत दिन तथा उनीहरूको रोजगारीलाई सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको छ ।
यसलाई देखेर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकार कोरोना भाइरसले निम्त्याएको क्षतिका बारेमा जानकारविहीन रहेको टिप्पणी गरे ।
सरकारले भर्खरै संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै देउवाले सरकारले भाइरसका कारण नागरिकले भोगिरहेको पीडा बुुझ्ने ‘हृदय नभएको र दुःखप्रति कुनै संवेदना नभएको’ भन्दै आलोचना गरे ।
देउवाले सरकारको कार्यशैलीप्रति गरेको टिप्पणी ठीकै हो । २ महिनाभन्दा बढी समय बन्दाबन्दीमा घरभित्रै बसेका नागरिकले सामान्य राहत पनि पाएका छैनन् । कामको सिलसिलामा घरबाहिर रहेका मजदुरहरू खानेपानीको अभावमा हप्तौँ पैदलै हिँडेर घर पुग्न विवश भए ।
काम गुमाएका तथा २ महिनादेखि घरबाहिर निस्किन नपाएका मजदुर सामान्य गाँसको अभावमा छट्पटाइरहेका छन् । साना व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
रोजगारदाताका उस्तै समस्या छन् । सरकार कोरोनाको एक मात्र औषधि बन्दाबन्दी मात्रै हो भनिरहेको छ । तर, यत्रो लामो समय बन्दाबन्दी गरेर के उपलब्धि भयो र अघिल्लो पटकको भन्दा आउने पटकको बन्दाबन्दी के अर्थमा फरक र आवश्यक छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैन ।
समग्रमा सरकार कोरोनासँगको लडाइँमा कुहिरोको काग नै भएको छ । तर, यहाँ सरकार मात्र होइन, प्रतिपक्षी अझ बढी कमजोर, दिशाविहीन र योजनाविहीन देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसकोे १७ वैशाखमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । बैठकले कोरोनाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा परेको असर अध्ययन गरी देशका लागि आवश्यक पर्ने कार्य गर्न भन्दै लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति गठन गर्‍याे ।
व्यापारी सांसद विनोद चौधरीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा १५ जना सदस्य छन् । समितिमा अझ ६ जना सदस्य थप्न सकिने उल्लेख छ । विशेष समितिका सदस्यहरूको अनुहारले नेपाली कांग्रेसको भविष्य बोलिरहेको छ ।
संसदमा उभिएर सरकारलाई पाठ सिकाउने प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पार्टी सभापतिको नियत, स्वार्थ र मनोदशालाई प्रष्ट्याएको छ । उक्त समितिका सदस्यहरूको पृष्ठभूमिको सामान्य अध्ययन मात्र गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस अब कस्तो दल हुँदै छ ? भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
कोरोनासँग लड्ने एक मात्र औषधि बन्दाबन्दी हो भन्ने गलत र अत्यन्तै बालबुझाइ रहेको सरकारबाट धेरै अपेक्षा राख्न सकिन्न । २ महिना देशभरिका नागरिकले विनाराहत, विनाक्षतिपूर्ति बन्दाबन्दीलाई सहजै स्वीकारिदिएकाे शायद नेपालमा मात्र हाे ।
कोरोनासँग लड्दै भविष्यको योजना कोर्नका लागि यति सहजै नागरिकले २ महिना ‘बोनस’ दिएर पनि केही गर्न नसकेर सरकारले आफ्नो नालायकीपन त देखाइरहेको छ । तर, प्रतिपक्षीको हालत अझ उस्तै छ ।
प्रतिपक्षी दल, जसलाई ‘वेटिङ गभर्नमेण्ट’को रूपमा लिइन्छ, त्यसको चाला र चर्तिकला हेर्दा झन् उदेक लाग्ने अवस्था छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई गलत काममा खबरदारी गर्दै राम्रो कामका लागि रचनात्मक सल्लाह सुझाव दिने जिम्मेवारी हो ।
आफ्नो जिम्मेवारीमा प्रतिपक्षी निकम्मा देखिएको छ । अझ यस विषम परिस्थितिमा गठित लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले प्रतिपक्षीको असली अनुहार देखाइदिएको छ । भ्रमको पर्दा च्यातिदिएको छ ।
अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिका उनीसहित अन्य १४ जना सदस्यको अनुहार हेर्दा दुईवटा कुरा प्रष्ट देखिन्छ ।
पहिलो, यसले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिको लगाम कुन वर्ग, समूहको हातमा पुगेको छ भन्ने देखाउँछ भने दोस्रो, पैसाको बलमा कांग्रेसमा सबै पद किन्न सकिने गरी लिलामीमा राखिएको प्रष्ट देखाउँदछ ।
कोरोनाका कारण सिर्जित विषम परिस्थितमा लगानी, पूर्वाधार र रोजगारको क्षेत्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिने र यसबारेमा दुरगामी दृष्टिकोण र दिगो परियोजनाको परिकल्पना र कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको समितिका सदस्यहरू दलाल, ठेकेदार, गुण्डागर्दीमा चर्चितबाहेकका एक जना पनि अन्यको नाम छैन ।
यति महत्त्वपूर्ण समितिमा एक जना पनि बौद्धिक पृष्ठभूमिका आलोचनात्मक चेत राख्ने र दीर्घकालीन रणनीति विकास गर्न सक्ने व्यक्ति समेटिएका छैनन् ।
अब समितिका सदस्यहरूको पृष्ठभूमि हेरौँ ।
संयोजक विनोद चौधरीको वास्तवमा कुनै पार्टी छैन । न त कुनै विचार छ । अघिल्लो पटक तत्कालीन नेकपा एमालेबाट सांसद भएका र यस पटक कांग्रेसबाट समानुपातिकमा परेका हुन् । अर्को निर्वाचनमा कांग्रेसले पनि नपत्याउने भयो भने कुनै अर्को दललाई ठूलो रकम चन्दा दिएर सांसद किन्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।
पैसाको बलमा दल फेरेर भए पनि सभासद पद किन्ने चौधरीका कर छलीका काण्डहरू बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहन्छन् ।
समितिका सदस्य दिपक खड्का पर्यटन व्यवसायी हुन् । उमेश श्रेष्ठ देशकै शैक्षिक माफियाको रूपमा चिनिन्छन् । पैसाको बलमा पटकपटक सांसद पद किन्दै आइरहेका छन् ।
तेजुलाल चौधरी पनि निजी विद्यालयमार्फत कुरूस्त पैसा कमाएका मध्येमा पर्दछन् । ईन्द्र बानिँया मकवानपुरका गुण्डा नाइकेको रुपमा चिनिन्छन् । प्रदेश सभासदसमेत रहेका बानियाँ ठूला ठेकेदार हुन् र नेताका लगानीकर्ता पनि ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका टेकबहादुर गुरुङ भृकुटीमण्डपको फन पार्क टेण्डर नै नगरीकन लामो समयसम्मका लागि भाडामा लिएर विवादमा आएका थिए । आफ्नै म्यानपावर व्यवसाय भएका गुरुङ मन्त्री हुँदा निकै विवादित थिए ।
कर्मा घले रक्सी फ्याक्ट्रीका मालिक हुन् । दोलखाका ठेकेदार जिपछिरिङ लामा, रामेछापका पूर्णबहादुर तामाङ, रसुवाका मोहन आचार्य चिनिएका ठेकेदार हुन् ।
पैसाकै बलमा सांसद पद र प्रत्यक्ष निर्वाचनको टिकट खरिद गर्ने व्यक्ति हुन् । अनिल रुङ्गटा वीरगञ्जका व्यापारी हुन् । सूर्य केसी पैसावाल व्यापारी हुन् ।
डडेल्धुराका खगेश्वर बाेहोरा निर्माण तथा यातायात व्यवसायी हुन् । झापाका छत्र गिरी चियाबगानका मालिक तथा अन्य विभिन्न उद्योगका सञ्चालक हुन् भने सुर्खेतका विष्णु खड्का उद्योगी व्यवसायी नै हुन् ।
समितिमा रहेका १५ जनाकै पृष्ठभूमि हेर्दा यिनीहरू पार्टीमा कुनै आस्थावान्र होइनन् । बरु आफ्नो सीमित आर्थिक स्वार्थ मात्र छ । र आफ्नो स्वार्थको संरक्षणका लागि पार्टीमा आवद्ध भएकाहरू मात्र छन् ।
यो समिति गठनको बाहिर देखिने रूप र भित्री सार फरक छ भन्ने समकालीन राजनीतिमा चासो राख्ने सबैले प्रष्ट बुझेका छन् ।
यो कुनै विशेष अध्ययन गरी पार्टीलाई मार्गदर्शन गर्ने र समस्याको समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिने प्रतिवेदन तयार पार्नेभन्दा पनि आफू र आफ्नो गुट चलाउन आवश्यक पर्ने ‘दानापानी’को व्यवस्था गर्न गठन गरिएको समिति हो भन्ने प्रष्ट छ ।
कांग्रेसको यो समितिका सदस्यहरूमा देउवा, पौडेल, कोइराला र सिटौला गुटमा सक्रिय भएर आफ्नो गुटका नेतालाई दानापानी पुर्‍याउने ठेकेदार र व्यापारी मात्र समेटिएका छन् ।
मानव तस्करी गर्ने म्यानपावर व्यवसायी, कर छली गर्ने व्यापारी, दलाल, शैक्षिक माफिया, तथा गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारहरू मात्र छन् ।
यी सबैले आफ्ना गुटका नेतालाई लगानी गर्ने, पैसा दिने गरिरहेकाे कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ । उनीहरूमा कुनै विशिष्ट गुण र विशेषज्ञता भएका कारण यो समितिमा राखेको पनि होइन । बरु आफ्ना गुटका नेतालाई विगतमा गरेको करोडौँ लगानीको बदलामा यी पद पाएका हुन् ।
पार्टीमा आस्था राख्ने बाैद्धिक तथा विज्ञ व्यक्तिहरूमार्फत गर्नुपर्ने अध्ययन र बनाउनुपर्ने रणनीति पैसावाला दलाल तथा ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउने पार्टीका सभापतिसँग पनि पार्टीका असली, इमानदार र बौद्धिक नेता कार्यकर्ताले भोगिरहेकाको पीडा बुझ्ने ‘हृदय नभएको र उनीहरूको पीडाप्रति कुनै संवेदना नभएको’ देखिन्छ ।
पैसाको अघि इमान, जमान, बौद्धिकता र त्यागलाई धज्जी उडाउने देउवाले कुन नैतिकताका आधारमा अरुलाई आलोचना गरिरहेका हुन् ? दलाल, माफिया तथा ठेकेदारले नीति नियम बनाउँदा भोलि पार्टीमा कसको स्वार्थ हावी हुन्छ ? कसैले सम्झाइदिए हुने ।
‘विपन्नलाई आय र निमुखालाई न्याय’ भन्ने बीपीको आदर्शलाई कांग्रेसले इतिहासको साँघुरो गल्लीमा अलपत्र पारेको छ । दलाल, माफिया र ठेकेदारहरूको बोलवाला बढ्दै गएको छ । पैसावाललाई टिकट बेच्ने गुटका नेताहरूको स्वार्थका कारण अघिल्लो निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो दल अहिले मरिचझैँ चाउरिएको प्रष्ट छ । तर, पनि कांग्रेस सुध्रिएको छैन ।
‘म हरेक नेपाली नागरिकलाई १५ वर्षभित्र आफूजस्तै बनाउन चाहन्छु’ भन्ने बीपी कोइरालाको राजनीतिक दर्शन थियो । विपन्न, गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको चाहना तथा भलाइलाई चटक्कै भुलेर नेतृत्व तह रहेर गुट चलाउने सबै नेताहरू आफ्ना लागि केही रकम सहयोग गर्ने दलाल, भ्रष्ट, ठेकेदार र माफियाको कब्जामा पुगेका छन् ।
आफ्नै स्वार्थले पुतलीजस्ता बनेका नेताहरू यिनै दलाल, ठेकेदार तथा माफियाले जसरी नचाउँछन्, त्यसैगरी नाचिरहेका छन् । न देशको माया छ, न लोकतन्त्रको माया छ, न त आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीप्रति नै सचेतना र सजगता छ ।
केवल औपचारिकताका लागि सरकारको आलोचना गर्ने तर आफ्नो अनुहार कहिल्यै ऐनामा नहेर्ने नेताहरूले सिंगो नेपाली कांग्रेस मात्र सकेका छैनन्, देशलाई भड्खालोमै पुर्‍याएका छन् ।
अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ४ जेठमा संसदमा उभिएर सरकारलाई नागरिकले भोगिरहेको पीडा बुझ्ने हृदय नभएको र दुःखप्रति कुनै संवेदना नभएको भनेका थिए । सरकारको गतिविधि र कार्यशैलीलाई बुझाउन यो ठीकै भनाइ हो ।
यदि देउवा आफूलाई नागरिकको पीडा बुझ्ने र संवेदनासहितको हृदय भएको व्यक्ति मान्छन् भने आफ्नो नेतृत्व र आफूले सभापति भएपछि गरिरहेका गतिविधिलाई नियालेर हेरे पनि उनलाई ‘मसान वैराग्य’ चल्नेछ ।
पैसाको लोभ र स्वार्थमा परी दलाल, विचौलिया, ठेकेदार र माफियाहरूको हालीमुहाली बढिरहेको देख्दा आम इमानदार र बाैद्धिक कांग्रेसीजनको मनमा चलिरहेको बेतोडको हुण्डरीलाई पनि अनुभव गर्नेछन् ।
र, कुनै पनि ढिलाइ नगरी तेस्रो पुस्तामा कांग्रेसको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाउनेछन् । नत्र अर्काको आङको जुम्रा देख्ने आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने उखान देउवाको हकमा हुबहु लागू हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ५, २०७७, १४:००:००